Nyama dzinodyiswa nechikafu, chikafu chinogadzirwa nemvura, mvura inobva kuchibayiro, uye chibayiro chinoitwa nekuita. Ziva kuti chiito chinobva kuMweya Mukuru uyo ​​uri mumwe; ndosaka iwoMweya wese uzere nguva dzose uripo muchipiriso.
Vol. 1 MARCH, 1905. Nha. 6
CHAKUDYA hachifanirwe kuve chakajairwa-nzvimbo kuti ive nyaya yekubvunza kwehunyanzvi. Vamwe vanoshandisa chikamu chikuru chemaawa makumi maviri nemana vachishandira kuti vawane mari yakaringana kutenga chikafu chinodiwa kuchengetedza muviri pamweya pamwe chete. Vamwe vanofarira kutenderera vanopedza nguva yakawandisa vachironga zvavachadya, kuti zvichagadziriswa sei, uye kuti zvichavafadza sei uye nemadziro eshamwari. Mushure mehupenyu hwese-hwakapedzerwa vachidyisa miviri yavo, vese vanosangana nemufungo mumwechete, vanofa, vanoiswa parutivi. Grimy mushandi uye murume wetsika, sweat-shopu mushandi uye mukadzi wefashoni, butcher uye musoja, mushandi uye tenzi, mupristi uye pauper, vese vanofanira kufa. Mushure mekudya miviri yavo pachavo mishonga yakapusa nemidzi, pazvikafu zvinovaka uye nezvakawanda zvakanaka, miviri yavo inoshandawo sechikafu chemhuka nepamhunga dzepasi, hove dzegungwa, neshiri dzedenga, murazvo wemoto. moto.
Zvisikwa zvinoziva muumambo hwaro hwese. Iye anofambira mberi kuburikidza nemafomu uye miviri. Humambo hwega hwoga hwoga hunovaka miviri yekumisa shanduko iri pazasi, kuratidza humambo kumusoro, uye kuzviziva. Izvo zvakasikwa zvese saka zvakagadzirwa nenhengo dzinoenderana. Chikamu chimwe nechimwe chine basa rakapetwa kaviri, kuve chirevo chekuzivisa kune icho pazasi, uye kuve chikafu chemuviri we icho chiri pamusoro pacho.
Chikafu ndiko kudya kana chero chinhu chinodiwa pakuumbwa, kushanda, uye nekuenderera mberi, cherudzi rwese rwemuviri, kubva pamineriki yakaderera kusvika kuhungwaru hwepamusoro. Ichi chikafu kana chinyorwa chiri kutenderera nekusingaperi kubva kumanyoka emasimba kuita maforati, kubva ipapo muzvinhu zvakaumbwa uye nemiviri yemitumbi, kusvikira izvi zvagadziriswa kuva miviri yehungwaru uye masimba. Saka zvakasikwa pazerese zviri kuramba zvichizvidyira zvoga.
Kubudikidza nezvisikwa zvekudya gashira miviri uye uuye munyika. Kuburikidza nechikafu ivo vanogara munyika. Kuburikidza nechikafu vanosiya nyika. Hapana anogona kupunyuka mutemo wekudzoreredzwa uye muripo izvo zvakasarudzika zvinoramba zvichienderera zvichitenderera kuburikidza nehumambo hwaro, zvichidzokera kune chimwe nechimwe chakatorwa kubva mazviri uye asi zvakachengetwa mukuvimba.
Nekushandisa kwakakodzera kwemitumbi yekudya inoumbwa uye vanoenderera mberi kwavo cyclic kushanduka kwekukura. Nekushandisa zvisirizvo chikafu chikafu chine hutano chichava chirwere uye chisingapere mukutenderera kwerufu.
Moto, mweya, mvura uye pasi, ndizvo zvinhu, zvemidzimu zvinhu, izvo zvinosangana uye zvinopinda dombo rakasimba rekongiri uye mineral yepasi. Pasi chikafu chikafu chemiriwo. Iyo simiti inorova midzi yayo padombo uye nehungamiro yehupenyu inoputika ichivhura uye inosarudza ipapo kubva pane chikafu chinodiwa kuti chivake chimiro chitsva pachayo. Hupenyu hunoita kuti chirimwa chikure, chiwedzere, uye ndokura kuva chimiro chinonyanya kuratidza chega. Inotungamirirwa nehukama uye kuchiva iyo mhuka inotora sechikafu chayo pasi, miriwo, uye dzimwe mhuka. Kubva pasi uye chimiro chiri nyore chechirimwa, mhuka inovaka muviri wayo yakaoma nhengo dzemitezo. Mhuka, chirimwa, ivhu nezvipenga, zvese zvinoshanda sechikafu chemunhu, Mufunge.
Chikafu ndeemhando mbiri. Zvikafu zvepanyama ndezvevhu, zvidyarwa uye mhuka. Chikafu chemweya chinobva kune yakasikwa yakasarudzika sosi iyo iyo yenyama inoenderana nekuvapo kwayo.
Munhu ndiye anotarisana, murevereri, pakati pezvomweya nepanyama. Kubudikidza nemunhu kutenderera kunopfuurira kutenderera pakati pezvomweya nevenyama kunochengetwa kumusoro. Elements, matombo, zvinomera, zvinokambaira, hove, shiri, mhuka, vanhu, masimba, uye vamwari, zvese zvinobatsira kutsigirana.
Shure kwemaitiro emurume ane lemniscate anoramba achitenderera chikafu chemuviri neyomweya. Kubudikidza nemifungo yake murume anogashira chikafu chekunamata uye anochinjisa munyika yepanyama. Mumuviri wake murume anogamuchira chikafu chemuviri, chinoburitsa kubva ipapo, uye kuburikidza nemafungiro ake anogona kuchishandura nekuchisimudza ave mune chemweya.
Chikafu ndeimwe yevadzidzisi vakanaka vevanhu. Kuda kwechikafu kunodzidzisa vasingazivi uye inotsiga chidzidzo chekutanga chebasa. Chikafu chinoratidzira kune eponic uye glutton kuti-kunyanya kudyisa kunoguma nekurwadziwa uye chirwere chemuviri; uye saka anodzidza kuzvidzora. Chikafu chinhu chemashura. Zvinogona kunge zvisingaoneke zvakadaro kuvarume venguva dzino, asi mune ramangwana murume achaona uye nekufarira chokwadi ichi uye nekutsvaga chikafu chinoshandura muviri wake kuita chimwe chechinzvimbo chakakwirira. Chikonzero nei achitadza kuzviita izvozvi imhaka yekuti haadzore kuda kwake, haashandira vamwe-varume, uye haaone huMwari hunoratidzwa maari.
Chikafu chinodzidzisa munhu akasvinura mweya yechidzidzo chezvakasungwa uye zvekururamisira. Iye anoona kuti anogona kutora kubva kune zvakasikwa zvimwe zvigadzirwa zvake, asi kuti iye anoda uye anomanikidza mukamuri yake kuchinja kunoenzana kwavari. Kana mutemo wekutonga uchienzaniswa nemunhu unobva waita huchenjeri uye nekusimudzira kwevakaderera mumafomu epamusoro kunomuunza kupinda munyika yemweya kubva kwaanotora kukurudziro yake.
Zvese zvakasikwa chikafu. Denga rese rinozvidyira iro pacharo. Munhu anovaka mumuviri wake chikafu chehumambo zvese pasi, uye anotora kubva kumusoro kwake chikafu chemweya panguva yekufungisisa. Kana iyo yekushanduka-shanduka ichizoenderera mberi, iye anofanira kuzopa muviri wechikamu chakakwirira kupfuura iye. Ichi chiumbwa chine midzi midzi mumuviri wayo wemhuka uye ndicho chikamu chekunzwisisa chemweya chiri mukati memunhu. NdiMwari wake. Chikafu icho munhu chaanogona kupa mwari wake chakagadzirwa nepfungwa dzakanaka uye zviito, zvishuwo, uye kufungisisa kwehupenyu hwake. Ichi chikafu chinogadzirwa namwari-senge muviri wemweya. Iwo mweya mukati mayo mukana ihwo simba kana remweya mweya iro pacharo iro rehumwari nehungwaru hwaro hunogona kushanda.